Mutemo unoshanduka: pamusoro apa waiva Chiedza, pasi apa Upenyu hunozvivakira mumhando dzakasiyana-siyana pamusoro pepakati.
Pakati pehupenyu huri pakati nepakati, uye mukati, pamusoro, uye kuburikidza nehupenyu hwose hunoita hupenyu.
Vol. 1 AUGUST, 1905. Nha. 11
MASHOKO makuru enyika inoenmenal ndeye: kuziva, kufamba, chinhu, uye kufema. Izvo zvikonzero zvikuru kana nzira dzinotungamirirwa nayo nemitemo yenyika inoenmen inyika inoratidzika, ndeyi: hupenyu, chimiro, zvepabonde, uye chido. Izvo zviwanikwa zvezvikonzero izvi kana nzira kuburikidza nekuratidzwa munyika inoshamisa, ndeye: kufunga, humwe, mweya, uye kuda. Nheyo, zvikonzero, uye zvigadziriswa, zvakagadziriswa uye kupinda mukuziva. Izvo zvinotongwa zvenyika inoenmenal zvakaonekwa zvishoma. Chinhu chokutanga munyika inoshamisa inotangira isu: nyaya yehupenyu. isu ndezvechiitiko chekuziva chii kune nyika yeNenmenal.Kucherechedza ndiyo pfungwa yezvose zvinogoneka; kuburikidza nekuvapo kwaro zvinhu zvose zvinotungamirirwa kuburikidza nemamiriro ezvinhu nemamiriro ezvinhu kusvika pakupedzisira.
Upenyu ndiko kutanga kwemamiriro aya; kutanga kusima nekuedza; kufambira mberi kuburikidza nekuratidzwa munyika inoshamisa. Upenyu inzira yekuva; ndiyo chete nzira, kwete kuguma. Hupenyu munyika inoshamisa haisi yose; iyo inongova imwe yemafungiro-centrifugal kufamba-iyo iyo inoshamisa yezvinhu zvose yakashandurwa kuva maitiro sezvainofema kubva kune zvakasiyana.
Upenyu igungwa guru pane iyo Great Breath inotama, zvichiita kuti ichinje kubva kune yakasvibiswa uye isingaoneki yakadzika mifumo yenyika uye nyika. Izvi zvinotungamirirwa panzira yeupenyu husingaoneki muchimiro chinooneka. Asi kwechinguva chiduku, mafungu anotendeuka, uye zvose zvinotakurwa zvakare kupinda zvisingaonekwi. Saka pamasvingo ehupenyu husingaoneki nyika dzakabviswa uye dzinotorwa zvakare. Kune mavhiri akawanda emvura yeupenyu; nyika yedu nevose vari mairi inorarama mune rimwe remvura iyi. Izvo zvatinoziva nezvehupenyu ndeyekufamba kwaro kuburikidza nechimiro chinoratidzika, pakuchinja kwemvura, kubva kune zvisingaoneki kune zvisingaonekwi.
Upenyu hunokosha, asi hwakawanda kwazvo kudarika zvinhu izvo zvinozivikanwa kuti hazvikwanisi kuverengwa pamwe nenyaya yechilistist. Sayenzi ndiyo nyanzvi yekuchenjera yehupenyu hwemazuva ano; asi nyanzvi yezvokudya ichafa muhucheche hwaro, kana ihwo husingaregi kupfuura rutivi rwezasi rwezvinhu zvinoshamisa. Irota dzomufizikiri nderokuratidza kuti hupenyu hunoguma panzvimbo pane chikonzero. Aizobereka hupenyu apo upenyu hwakanga huripo; inotungamirira mabasa ayo nemimwe mitemo; zvipe iyo nekuchenjera; ipapo vanozvidzivisa, vachirega kusava nehanya kwaro kwamborarama mune chimiro, kana kuti kuva nekunzwisisa huchenjeri. Kune avo vanotenda kuti hupenyu hunogona kubudiswa uko hwaisavapo; kuti iratidze uchenjeri; kuti njere inogona kuparara nokusingaperi. Asi hazvirevi kuti avo vakadaro vanokwanisa kunzwisisa nzira dzehupenyu pavanoramba kutenda kana kufungidzira pamusoro pehupo hwavo kunze kwemafomu. Zvimwe zvezviratidzo zvehupenyu zvinokosheswa, asi avo vakati vanokwanisa kubereka hupenyu kubva "nhepfenyuro" nyaya vachiri kure nechekugadzirisa dambudziko sezvavakanga vari pakutanga. Kuita kuti upenyu huvepo kubva munyaya inerara huchaguma nekuwanikwa kuti hapana "nyaya" isina kukwana, nokuti hapana hupenyu hunogona kubudiswa apo hupenyu husipo. Maitiro ekuratidzwa kwehupenyu angave asingagumi, asi upenyu huripo mumarudzi ose. Kana hupenyu hwaisati huri pamwe-nenyaya nenyaya, nyaya haigoni kuchinja mufomu.
Nyanzvi yehupenyu haigone kuziva mhuka yehupenyu nokuti kutsvaga kwake kunotanga uye kunoguma apo hupenyu huri kupfuura nepasi yenyika. Anoramba kutarisa hupenyu usati hwaoneka, kana kuti hutevere mumafungiro ake mushure mekunge wasiya maitiro ayo. Upenyu ihwohwo hunoshamisa hunoshandiswa hunoonekwa kuburikidza nemafomu, asi upenyu ndicho chinhu chinobva kwatiri chatinosimudzira mafomu: naizvozvo kufamba kwemafungu ehupenyu mukuparadzwa uye kuvakazve mafomu. Upenyu ndicho chirevo chekura nekuwedzera mune zvinhu zvose.
Nyika yedu yakaita sepakona uye yakaoma mukati megungwa rehupenyu. Tinorarama pane ganda rechipanji ichi. Isu takatakurwa kunharaunda iyi nekufambisa pamvura inopinda yegungwa rehupenyu uye mushure menguva, pamubhedha, tinobva tasimuka uye tichipfuurira, asi tichiri mugungwa rehupenyu. Sezvo zvinhu zvose uye zvisikwa zvaro zvinogara mumwe nomumwe mumvura yaro yehupenyu, saka kana pfungwa kuburikidza nekufema kunopinda mumuviri pakuberekwa, mumwe nomumwe anopinda mumvura yega yega yehupenyu.
Mukuvakwa kwehupenyu hwemuviri hunoenda mukati uye hunoenderana maererano nekugadzirwa kwakagadzirwa, uye nhengo dzenjere dzakagadzirwa. Pfungwa iyo inogara mumuviri uyu inomirirwa muhupenyu hunofadza. Ikozvino yakajeka yehupenyu inopfuura nepfungwa yomuviri inotaridzwa nezvido zvekunzwisisa. Pakutanga pfungwa inopindura kunakidzwa kwekunzwa kwehupenyu. Mufaro ndechimwe chikamu chekunzwa kwehupenyu, chimwe chikamu chinorwadziwa. Pfungwa dzinofadza nemufaro kana uchinzwa manzwiro ehupenyu mumuviri. Chido chekuwedzera kunzwa kwemufaro kunokonzera kuitika kwekutambudzika apo, kuneta, nhengo dzenjere dzisingachagoni kupindura panguva yakarongeka yehupenyu. Munyika inoratidzika kuzadzwa kwehupenyu kuri mupfungwa, uye kufunga kwakashandura ikozvino kwehupenyu.
Tinorarama mune iri gungwa rehupenyu, asi kufambira mberi kwedu kunonoka chaizvo, nokuti isu chete tinoziva hupenyu sezvainosimudzira pfungwa. Iko pfungwa inofara apo nguva iyo pfungwa dzinofamba uye dzinozadzwa nekupfuura kwehupenyu; asi apo, munguva yekuvandudza kwepfungwa, pfungwa dzinosvika pakuguma kwezvisikwa zvavo zvepanyama dzinoputirwa nemafungu ehupenyu, kunze kwekuti pfungwa dzakadaro dzizvibvisa kubva pamararamiro ayo ekuti inogona kuzarura pfungwa dzomukati. Izvozvi zvichange zvichitakura kubva kunze kwekuyerera kwayo kusvika mumvura yakakwirira yehupenyu. Ipapo pfungwa haibviswe nemvura inokonzera yekukanganwa, kana kuputika pamatombo ekunyengera uye kunetseka, asi inotakurwa pamusoro pezvipfeko zvayo kupinda mumvura ine ruvara rwehupenyu, uko inodzidza uye inogadzirisa mararamiro ayo uye inokwanisa kutora nzira yakachengeteka kuburikidza nemativi ese uye zvikamu zvehupenyu.
Upenyu haugone kupera. Iyi hupenyu hwekunzwa hunoitika asi nguva pfupi. Kubudirira kuburikidza nemanzwi pfungwa iyo inonamatira kumarudzi ose ehupenyu huno; asi kana pfungwa dzichibuda uye dzakakura muhupenyu hwenyika ino dzinokurumidza kuparara. Mhando iyo pfungwa inogona kubata nayo inopera uye yatoenda kunyange iyo ichinyorwa.
Pfungwa inotsvaka ruzivo muhupenyu iyo inopinda iyo inogona kudzidza kuongorora uye kufamba nenzira yakadzika. Apo pfungwa inokwanisa kutsvaga zvakadzika uye kubatisisa nzira yayo yechokwadi kurwisana nemirwi yose inopikisa chinhu chehupenyu chiri kuitwa. Iko pfungwa inokurudzirwa uye inosimbiswa nemhepo imwe neimwe inopikisa sezvo inokunda. Iko zvino kukwanisa kushandisa mazamu ese ehupenyu pane zvakanaka panzvimbo yekutendeuka kubva pane imwe nzira uye kukundwa navo.
Zvatiri iye zvino zvichitaurira pamusoro kana kuziva, ndeye hupenyu hwomufomu huri kuchinja nguva dzose. Izvo zvatinofanira kuedza kuziva uye kurarama upenyu hwusingaperi, kugona kukuru kwekuziva.